Noho ny fizarana ilay fanampiana avy amin’ny Fitondram-panjakana ho an’ireo mpampianatra no anton’izany. Mpampianatra miisa 3000 no nozaraina aron-tava, tabavy CVO ary vatsy tsinjo nandritra izany. Zap 6 no nanaovana ny hetsika raha araka ny loharanom-baovao ka ho an’ny ZAP 1 dia tetsy amin’ny Lisea maoderna Ampefiloha no nanatanterahana izany. Nisy tamin’ireo mpianatra tsy nahalala fandaharam-potoana araka izany no niverina nody ka noraisin’ny olom-pirenena ho fanafoanana ny fampianarana eny anivon’ny sekoly tsy miankina izany noho ny fiparitahan’ny COVID 19 eto amintsika izay ahitana ankizy maro no voany. Hatramin’ny omaly zoma fotoana nanoratanay moa dia mbola tsy nisy ny vaovao ofisialy mikasika izany. Mbola mianatra hatrany ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana eny anivon’ny sekolim-panjakana raha nisy tamin’ireo sekoly tsy miankina sasany no efa nanapa-kevitra ny hampitsahatra izany aloha.